के तपाई ले कहिले ख्याल गर्नु भएको छ तपाइको हातमा कति वटा चक्र र शंख छ? कति शंख वा चक्र भएमा के हुन्छ? थाहा पाउनुहोस् आफ्नो भाग्य । - IAUA
के तपाई ले कहिले ख्याल गर्नु भएको छ तपाइको हातमा कति वटा चक्र र शंख छ? कति शंख वा चक्र भएमा के हुन्छ? थाहा पाउनुहोस् आफ्नो भाग्य ।
ramkrishna November 22, 2017	के तपाई ले कहिले ख्याल गर्नु भएको छ तपाइको हातमा कति वटा चक्र र शंख छ? कति शंख वा चक्र भएमा के हुन्छ? थाहा पाउनुहोस् आफ्नो भाग्य ।
हुन त हस्तरेखा को बारेमा हामीलाई थाहा नभएको होइन तर पनि कति कुरा हरु अझै रहस्यमय नै छन् । यदि हस्तरेखा विज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने सबै कुरा हातले नै निर्धारण गर्छ । हस्तरेखाहरु मानव जन्मदा नै तयार भएर आएका हुन्छन् । शास्त्रअनुसार जुन व्यक्तिको हातको औला जौ जस्तो हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति निकै धनी हुन्छन् । समाजमा प्रतिष्ठित पनि बन्नेछन् ।
३) मिश्रति प्रकारको शंख
बाँया तर्फ घुमेको शंख : जुन व्यक्तिको औलामा बाँया घुमेको शंख को चिन्ह छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूदाई प्रायः विदेशयात्राको अवसर प्राप्त भई नै रहन्छ र आफ्नो मिहिनेतको बलले समाजमा प्रसिद्धि कमाउँछन् । जातकलाई आध्यात्मतर्फ बढी रुचि गराउनुका साथै धर्ममा आस्था र विश्वास रहन्छ । यस प्रकारको शंख महिलाको लागि पनि अत्यन्त शुभदायक र सौ भाग्यकारी मानिन्छ ।
दाँयातर्फ घुमेको शंख : दाँया घुमेको शंख भएका व्यक्तिलाई भाग्यशाली, धनवान, ज्ञानी, प्रतिभाशाली र धमात्मा बनाउदछ । मिश्रति प्रकारको शंख दाँया र बाँया तर्फ घुमेको शंखको फल भन्दा लगभग उस्ता उस्तै मान्न सकिन्छ तर मिश्रति प्रकारको शंखको रचना दर्ुइ विभिन्न दिशातर्फ मोडिएको हुन्छ ।
क) बुढी औठामा बाँया घुमेको शंख भएमाः- जातकले आफ्नो जीवनकालमा धेरै हानी नोक्सानी र कठिनाईको सामना गर्नुपर्दछ, साथै भावि आउने वाला समस्या र कस्ट द्वारा निराश हुन्छ ।
ख) औठामा दाया घुमेको शंख छ भने :-यस्ता व्यक्तिहरू भाग्यशाली र धनी हुन्छन् ।
क) बायाँ घुमेको शंखको चिन्ह तर्जनी औलामा भएमाः-जातकले आफ्ना इस्ट मित्रबाट धन र मान सम्मानको हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्दछ ।
ख) तर्जनी औलामा दाँया घुमेको शंख छ भने :-त्यस्ता व्यत्तिले सामान्य जीवन यापन गर्ने हुन्छन् ।
३. मध्यमा औलाको टुप्पोमा दाँया घुमेको शंख भएमाः- जातकलाई धन पैसाको कुनै कमि हुँदैन र जातक धार्मिक विचारको स्वामी हुन्छ ।
४. अनामिका औलामा दाँया घुमेको शंख भएः- यस्ता व्यक्तिको संचित धन पैसाको नस्ट हुन्छ ।
Previous Previous post: जान्नुहोस् अमेरिका बारेमा ४० अति रोचक तथ्य
Next Next post: फ्रान्समा रोबोट ( यन्त्र मानब ) द्वारा कर्मचारी छनौट